आमा कहाँ छिन् भनेर सोध्दा नबताएपछि पिताले आफ्नै छोरीलाई २० गो ली हा नि दिए – Nepali Taja Khabar
एक पिताले आफ्नी छोरीसँग उनकी आमा कहाँ छिन् भनेर सो धेका थिए । तर, छोरीले आमाको ठेगाना बताइनन् । त्यसपछि रि सा एका पिताले छोरीलाई २० गो ली हा नेर मा रि दिएका छन् । पिताले छोरीलाई पहिले का रले ठ क्कर दिए त्यसपछि छोरीलाई २० गो ली हा नेका थिए ।
टर्कीमा भएको यो घ ट नामा ६९ वर्षका मुस्तफा अली यिलमाजलाई पुलिसले प क्रा उ गरेको छ । मुस्तफाकी २८ वर्षकी छोरी जनरल प्राक्टिसनर गुलनुर यिलमाज आफ्ना २ साथीहरुसँग बालिकेसरको
एन्ताल्यामा परीक्षा दिनको लागि जाँदै थिइन् । तर, उनका पितालाई उनी कहाँ छिन् भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो किनकि उनले छोरीको कारमा जीपीएस डिभाइस जडान गरेका थिए ।
कारमा गइरहेकी छोरीलाई मुस्तफाले अर्को गाडीले ठ क्क र दिए त्यसपछि कारबाट तान्दै बाहिर निकाले । छोरीलाई बा हिर नि कालेर उनले २० गो ली हा ने ।
द सनको रिपोर्टअनुसार यीमध्ये ११ वटा गो ली गुलनुरको टा उकोमा ला गेका थिए । गोली हा नेपछि घ ट ना स्थलबाट फरार भएका मुस्तफालाई पुलिसले बन्दुकसहित प क्रा उ गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस;- पसिना गन्हाउने समस्या छ ? यसबाट छटकारा पाउन यी उपाय अपनाउनुु हाेस्।।।
गन्ध प्रतिरोधक (डियोडोरेन्ट)ले पसिना आउन रोक्न सक्दैन । यसले गन्धलाई छोप्न मात्र सक्छ । कतिपय राम्रा एन्टी–पस्र्पिरेन्टमा डियोडोरेन्ट पनि मिलाइएको हुन्छ ।
यस्तो प्रोडक्टबाट पसिना नियन्त्रण र गन्धनिरोध दुवै काम लिन सकिन्छ । आजकाल पसिना नियन्त्रक चक्की पनि बनेका छन् ।
२. रोजवाटरको प्रयोग :– छालाका लागि रोजवाटर लाभदायक हुन्छ । एक जग पानीमा रोजवाटर राखेर त्यसमा कागतीको रस पनि राख्नुस् । अनि त्यसलाई काखीमुनि दल्नुस् । यसले पसिनाको दुर्गन्ध हटाइदिन्छ ।
नुहाइसकेपछि काखीमा नियमित रूपले फिटकिरी दल्ने गर्दा गन्ध पूरै हराउँछ । एक चम्चा ‘हाइड्रोजिन पेरोक्साइड’ भनिने ब्याक्टेरियानाशक
तरल पदार्थलाई एक गिलास पानीमा घोलेर तौलियाले शरीरका गन्ध आउने भागमा दल्नु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा पनि गन्ध पैदा गर्ने ब्याक्टेरिया नष्ट भई गन्ध हराउँछ ।
भर्खरै बिहे गरेर आएकी श्रीमतीले आमालाई सुन चोरेको आ,रोप लगाएपछि हसिली आमाको आखामा आसु छोराले देखेपछि ……